यी हुन्, लक्की नम्बर ०५४८९२ बाट कार बिजेता ! | Jukson
यी हुन्, लक्की नम्बर ०५४८९२ बाट कार बिजेता !
पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाका सन्दीप पौडेल माघ ४ गते उपचारको लागि पोखरा आए । वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममा सई पदमा कार्यरत नारायणप्रसाद पौडेलले छोरालाई साढँुभाई पोषण अधिकारीकहाँ पठाए । आल्मुनियम व्यवसायी पोषणले नै छोरा सन्दीपलाई कुष्माबाट पोखरा ल्याएका थिए । पोषणले माघ ४ गते आफैले टिकट काटेर सन्दीपलाई पोखराको नयाँबजारमा जारी सफल राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा दोस्रो मोवाइल मेला २०७४ पोखरा हेर्न लगे । मेला दुबैले हेरे ।
मृगौलामा पत्थरी भएका सन्दीपलाई पिता नारायणप्रसाद पौडेलले माघ ५ गते पनि मेला हेर्न लगे । पृथ्वीचोकमा रहेको अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका सन्दीपको लागि विद्यार्थी सहुलियत ४० रुपैयाँको टिकट काटे भने आफूले ६० रुपैयाँ पर्ने टिकट काटे । मेला आयोजक संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले मेलाको प्रवेश टिकटमा हुण्डाइ कम्पनीको करिब १८ लाख मूल्य पर्ने इवन कार उपहार राखेको उनलाई जानकारी थियो । दुबै दिन काटेका टिकट सुरक्षित राखे ।
मेलाको अन्तिम दिन उपहार खोलियो । पत्रकार टंक अधिकारी,नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष रामबहादुर पौडेल,उच्च अदालत पोखराका बार एसोसियसनका अध्यक्ष दयाराम गौतम,पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठजिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी अशोक सिँहकार्यक्रमका प्रमुख अतिथी पोखरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुुख मानबहादुर जिसीले एकपछि अर्को गर्दै अंकहरु निकाले । भाग्यशाली टिकट नम्बर ०५४८९२ घोषणा भयो । त्यो नम्बर कसको भन्ने चर्चाकै बीच पवर्तको नमुना आवासीय मावि कुष्मामा कक्षा ९ मा पढ्दै गरेका १५ वर्षीय सन्दीपले पनि आफ्नो टिकट नम्बर हेरे । संचारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरिएको नम्बरसहितको टिकट उनीसँगै थियो । तत्काल उनले आफ्ना पितालाई फोन गरे ।
पिता नारायणप्रसाद बुधबार टिकटसहित पोखरा उद्योग वाणिज्य बाणिज्य संघ आएपछि उनले लिएको टिकट र अर्धकट्टी भिडाइयो । संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, कोषाध्यक्ष पवनकुमार प्रजापति, टिकट व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक प्रेमबहादुर भुजेल, संघका कार्यकारी निर्देशक टोपबहादुर थापाको उपस्थितिमा संघमा सुरक्षित अर्धकट्टी र टिकटलाई भिडाएर प्रमाणित गरेपछि सन्दीप नै विजेता भएको घोषणा गरियो । संघले उनलाई आउँदो आइतबार अर्थात माघ १४ गते बिहान ८ ः३० बजे संघको सचिवालयमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी कार हस्तान्तरण गर्ने तय गरिएको छ ।
उत्तर कोरियामाथिको प्रतिबन्ध थप कडा बनाउने राष्ट्र संघको निर्णय